Iyo Android-x86 chirongwa chakaburitsa yekutanga yakagadzikana vhezheni ye Android 8.1 | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura ivo vanogadzira vanoona nezve iyo Android-x86 chirongwa, umo munharaunda yakazvimiririra iri kuisa iyo Android chikuva cheiyo x86 yekuvakwa (PC), vaburitsa yekutanga yakagadzikana vhezheni yegungano zvichibva papuratifomu yeApple 8.1.
Uku kuburitswa kutsva kunosanganisira zvigadziriso uye zvinowedzerwa zvinovimbisa kushanda kwakanaka pane x86-yakavakirwa mapuratifomu.
Kune avo vachiri kusaziva nezve chirongwa ichi Ini ndinogona kukuudza kuti Android-x86 chirongwa chisiri chepamutemo cheGoogle's Android mobile operating system kumhanya pane zvishandiso zvine x86 processor kubva ku AMD neIntel, pachinzvimbo cheARM RISC machipisi.
Iyo purojekiti yakatanga senge dzakateedzana zvigamba kuiyo Android sosi kodhi kuitira kuti igone kumhanya pamhando dzakasiyana dzemabhuku uye e-Ultra-maPC, kunyanya kune iyo ASUS Eee PC.
Uye nekufamba kwenguva, chirongwa ichi chakagadzira vateveri uye chakawana mukurumbira mukuru nacho chine nharaunda diki yevashandisi.
1 Main nyowani maficha e = Android-x86 8.1
2 Dhawunirodha uye edza Android x86 8.1 Oreo
Main nyowani maficha e = Android-x86 8.1
Nekuburitswa kutsva kwesisitimu, Tinogona kujekesa kuti mune izvi kunouya imwe nzira yekushandura mashandiro ezvirongwa zvebarbar, zvinopihwa pamwechete neyekutanga menyu yekushandisa.
Iyo ine kugona kuchengetedza mapfupi kune mapurogiramu uye iyo runyorwa inoratidza ichangoburwa yakatangwa maficha anowanzo shandiswa.
Mune ino vhezheni nyowani ye Android 8.1, FreeForm yakawanda-hwindo rutsigiro yakawedzerwa yebasa panguva imwe chete nemashandisirwo akawanda, pamwe nemukana wekumisikidza nekukwirisa windows pachiratidziri.
Iyo Linux kernel yakagadziridzwa kuita vhezheni 4.19.15. Tsigiro inopihwa ye64-bit uye 32-bit kernel magungano uye mushandisi nzvimbo yezvinhu.
Kune rimwe divi, eIyi vhezheni inoshandisa Mesa 18.3.1 kutsigira OpenGL ES 3.x ine Hardware yakamhanyisa mifananidzo yeIntel, AMD neNVIDIA GPUs., pamwe neVMware uye QEMU (virgl) chaiwo michina.
Uye kushandiswa kweSwiftShader yekupa software neOverGL ES 2.0 software yeasina kutsigirwa vhidhiyo masisitimu.
Imwe pfungwa yakakosha yekucherechedza nezve kuburitswa uku ndeyekuti Hardware inowedzera codec rutsigiro rweIntel HD uye G45 mifananidzo machipisi yakagadziridzwa.
Izvi zvakare zvinobatsira iyo system sekuyedza rutsigiro rweVulkan graph API inotanga pane masystem ane zvazvino vhezheni zveIntel uye AMD madhiraivha emifananidzo.
Zvakare neMouse Rutsigiro paunenge uchimhanyisa Android-x86 paVirtualBox, QEMU, VMware uye Hyper-V yakavakirwa chaiwo michina.
Pakupedzisira, Zvimwe zvinhu zvakakura kuratidza kuti kugona kubhuroka muEFI yakachengeteka boot mode uye kugona kuisa kune diski kana uchishandisa UEFI.
Yeimwe yekuvandudza uye maficha akaverengerwa mukuburitswa uku tinowana zvinotevera:
Iko kuvapo kweanopindirana inosimudza, kushanda mune zvinyorwa mode.
Bhootloader theme inotsigira muGRUB-EFI.
Multi-touch rutsigiro, makadhi eruzha, Wifi, Bluetooth, sensors, kamera uye Ethernet (DHCP kumisikidza).
ForceDefaultOrientation sarudzo yekugadzirisa manyore maitiro echiridzwa pane zvishandiso pasina inoenderana sensor. Zvirongwa zvakagadzirirwa mufananidzo wemifananidzo zvinogona kuratidzwa nenzira kwayo pamidziyo ine chidzitiro chenzvimbo pasina kutenderera mudziyo.
Iko kugona kumhanya pane x86 nharaunda mafomu akavakirwa iyo ARM chikuva, kuburikidza nekushandisa yakakosha dura.
Iko kugona kwekuvandudza kune vhezheni 8.1 yemasisitimu pane ayo asiri emhando shanduro dze Android-x86 akaisirwa.
Dhawunirodha uye edza Android x86 8.1 Oreo
Kugona kurodha pasi iyi nyowani vhezheni yesystem Iwe unogona kuenda wakananga kune yepamutemo webhusaiti yeiyo purojekiti uko iwe kwaunogona kuwana iyo system mufananidzo mune yayo yekurodha chikamu.
Zvakare, inogadzika muchimiro che rpm mapakeji anowanikwa kuisa iyo Android nharaunda pane Linux kugoverwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Android-x86 chirongwa chakaburitsa yekutanga yakagadzikana vhezheni ye Android 8.1